सरकार–मोर्चा छलफल सकारात्मक, के भयो बैठकमा ? | KTM Khabar
सरकार–मोर्चा छलफल सकारात्मक, के भयो बैठकमा ?
२०७४ बैशाख ८ गते १४:५७ मा प्रकाशित
काठमाडौँ, बैशाख ८ । सरकार र मधेसी मोर्चाबीच शुक्रबार बिहान भएको छलफल सकरात्मक दिशामा अगाडि बढेको छलफलमा सहभागी नेताहरुले बताएका छन्। मोर्चाले आन्दोलन घोषणा गरेपछि र मोर्चा घटक ६ दलको बीचको एकतापछि भएको पहिलो औपचारिक बैठकमा सरकार र मोर्चा दुवै लचक रुपमा प्रस्तुत भएका थिए।
काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा समेत उपस्थित रहेको बैठकमा मुख्य गरेर संशोधन प्रस्ताव र स्थानीय निर्वाचनका विषयमा छलफल भएको थियो। बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले मोर्चाकै लागि भनेर सरकारले दोस्रो पटक संसदमा संशोधन विधेयक पस्तुत गरेको भन्दै सरकारले प्रस्तुत गरेको संशोधन विधेयकलाई समर्थन गर्दै निर्वाचनमा सहभागी हुन अनुरोध गरेका थिए।
मोर्चाका नेताहरुले निर्वाचनभन्दा संशोधन आफूहरुको प्राथमिकता भएको बताउँदै संशोधन प्रस्तावमा हेरफेर गर्न अनुरोध गरेका थिए। अहिलेको संशोधन विधेयकले मधेसी जनताले मूर्त रुपमा केही कुरा प्राप्त नगर्ने भन्दै उनीहरुले ठोस उपलब्धि देखिने गरी संशोधन हुनुपर्ने बताए। मोर्चाको नयाँ प्रस्तावपछि प्रधानमन्त्रीले सक्तारुढ दलको बैठकपछि पुनः साँझ संयुक्त बैठक बस्ने बताए।
छलफल सकरात्मकः वर्षमान
सक्तारुढ दल माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले सरकार र मोर्चाबीचको बैठक सकरात्मक रहेको बताएका छन्। बैठकपछि प्रत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले बैठकमा संविधान संशोधनलाई कसरी टुंगोमा पु¥याउने, त्यसमा मोर्चाको पोजिसन के हुने भन्ने र स्थानीय निर्वाचनमा मोर्चाको सहभागिता गरी दुई विषयमा छलफल भएको बताए। उनले सरकारले संशोधन र निर्वाचन पक्रिया दुवैलाई एकसाथ अगाडि बढाउने प्रस्ताव राखेको बताए।
उनले भने, ‘‘संविधान संशोधन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने, मोर्चा निर्वाचनमा आउने र त्यसका लागि सरकारले यी दुबै कामलाई सँगसँगै अघि बढाउने प्रस्ताव राखिएको छ। त्यसमा मोर्चा सकारात्मक देखिएको छ।’
नेता पुनले सरकारले आजै यो विषयलाई टुंगो लगाउने गरी छलफल अगाडि बढाएको बताए। उनले भने, ‘आजै तीन बजे सत्तारुढ दल र पाँच बजे मोर्चासँग बैठक बसी आजै यो विषयलाई टुंग्याउने गरी सकरात्मक छलफल भएको छ।’ उनले संशोधन प्रस्तावमा परिमार्जन गर्नुपर्ने भए पनि छलफल गरी संसदमा लैजाने बताए।
आज सहमति नभए भोलिबाट हामी मधेस झर्छौः कर्ण
मोर्चाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले आजको बैठकमा सहमति नजुटे भोलिबाट आफूहरुले घोषित आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाउन मधेस झर्ने बताएका छन्। बैठकपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै नेता कर्णले अहिले आएको संशोधनको धार ७, १७४ र आयोगको गठनप्रति आफूहरुको असहमति रहेको बताए।
उनले असहमतिलाई परिमार्जन गरी जनताले केही पाउने गरी संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन भए मात्र मान्य हुने बताए। संविधान संशोधन आफूहरुको बटमलाई भएको भन्दै उनले बताए। उनले भने, ‘आज हाम्रो अन्तिम दिन हो, भोलि हाम्रो कार्यक्रम छ। आज सहमति नभए हामी मधेस लाग्छौँ, काठमाडौँमा बस्दैनौँ।’